Efa misy sampan-draharaha etsy Befelatanana - Madagascar-Tribune.com
vendredi 10 octobre 2008 | Poussy R., Volana R.
Tsy mila mandeha lavitra intsony ankehitriny raha hanao « acupuncture » na ilay antsoina hoe « tsindrona volamena ». Efa misy sampan-draharaha misahana izany ao amin’ny INSPC Befelatànana. Dokotera avokoa no manatanteraka ny fitsaboana.
Fanairana ny vatana hampirindra ny tsy fifandanjan-kery ao aminy no antony hanaovana ny tsindrona volamena na “acupuncture”. Tsy ara-dalàna mantsy ny fikorianan’ny angovo na ny hery amin’ny vatana, ka izany no mahatonga ilay aretina. Aretina maro no sitran’ity “acupuncture” ity, toy ny sohika, allergie, AVC, sy ny maro hafa. Teboka 600 hatramin’ny 900 amin’ny vatan’olombelona no hahafahana manao izany. Manomboka eny amin’ny loha hatrany amin’ny faladia no misy ireo teboka ireo.
Miankina amin’ny aretina mahazo ilay olona kosa no hahafahana mamantatra ny teboka asiana ny fanjaitra. Maharitra 15 minitra farafahakeliny ny fitsaboana iray. Miankina amin’ny aretina ihany koa ny isan’ny andro hanaovana ny fitsaboana. Nanambara Ratianarimaindramanana Evelyne, dokotera tompon’andraikitra ao amin’ity sampan-draharaha ity, fa irony tapaka lalan-drà, mivilam-bava irony aza, sitran’io fitsaboana io. Miankina amin’ny fotoana nisehoan’ilay aretina sy ny tahany kosa ny fetran’ny fitsaboana. Raha sohika ohatra, dia tsy maintsy manaraka ny fitsaboana mandritra ny 10 andro ny marary, ary mamerina in-telo izany avy eo. Ar 2000 monja isaky ny mitsabo no aloan’ny marary, izany hoe, raha maharitra 10 andro ny fitsaboana, dia Ar 2 alina no homanina. Tsy voatery aloha miaraka izany.
Karazany telo ny fomba hahafahana mitsabo amin’ity “acupuncture” ity. Ny tsindrona, ny voan’anana, ary ny “moxa.” Soritr’aretina vokatry ny korontana ao amin’ny vatana na ny soritr’aretina mitaiza, dia voatsabo amin’ny alalan’ity fitsaboana ity daholo. Marihana fa fitsaboana nentim-paharazan-dry zareo Sinoa izy ity. Anisan’ny tanjona napetraky ny OMS ihany koa ny fanamafisana ny fampiharana ny fitsaboana nentim-paharazana. Dokotera efa niasa nandritra ny 4 taona avokoa no niverina nianatra nandritra ny 2 taona, ny fomba fanatanterahana ity fitsaboana ity, ao Befelatanana.Azon’ny rehetra atonina.